लघुकथा परिचर्चा एवम् जन्मोत्सव सम्पन्न - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २२ चैत्र २०७७, आईतवार २२:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, चैत्र २१ गते ।
साहित्य तथा संस्कृति मञ्चले लघुकथा परिचर्चा एवम् जन्मोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मञ्चकी अध्यक्ष तारा केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रमको सञ्चालन संसाक मासिकका सम्पादक उमेश पाण्डेयले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाली लघुकथामा विद्यावारिधि उपाधि गरेका डा. पुष्करराज भट्ट एवम् साझा प्रकाशनका सञ्चालक समिति सदस्य लघुकथाकार हरिप्रसाद भण्डारीले लघुकथा लेखनका सम्बन्धमा आफ्ना दृृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा साहित्यकारहरू प्रा.डा. गार्गी शर्मा, तारा केसी, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ अनामणि, प्रेम राई परीक्षित, धरणीधर गुरागाईँ एवम् उत्तम भेटवालले आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । सहभागीहरूको जिज्ञासा र प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर विद्वानद्वय भट्ट र भण्डारीले लघुकथा लेखन विषयमा विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा भगीरथ काफ्लेको जम्मोत्सव मनाइएको थियो । काफ्ले साहित्यकार प्रा.डा. गार्गी शर्माका पति हुन् । कार्यक्रममा पतिपत्नी दुवैलाई मञ्चमा राखिएको थियो र सहभागीले खादा लगाएर सम्मान गरिएको थियो ।
यस समारोहमा प्रा.डा. गार्गी शर्मा, हरिप्रसाद भण्डारी, डा. पुष्करराज भट्ट, डा. सत्यराज थपलिया, प्रेम राई परीक्षित, उमेश पाण्डे, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ अनामणि, भगीरथ काफ्ले, टंकबहादुर खत्री, उतम विचार भेटवाल, धरणिधर गुरागाई, प्रशान्त डंगोल, महेश नेपाल, कृष्णबहादुर नेपाली, तारा के.सी, सीता बिष्ट कार्की लगायतका स्रष्टाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा रचना वाचन गरिएको थियो ।